အားလပ်ရက် စွန့်စားခန်း - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
ဒီနေ့…. ဦးအောင်မော်တို့ မိသားစု အနောက်ဘက် ကမ်းခြေသို့ ခရီးထွက်လာခဲ့ကြသည်။ သူတို့မိသားစုအပိုင်ဝယ်ထားသော ကိုယ်ပိုင်ကမ်းခြေနှင့် အပန်းဖြေ အိမ်ကြီးတွင် ဟောလီးဒေး ပိတ်ရက်အတွင်း မိသားစု အနားယူရန် လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အခြား ဂဇက်တက် ဟောလီးဒေး ၂ ရက်နှင့် ကြား ၁ ရက်ခံပြီး စနေ တနင်္ဂနွေ ဆက်ပိတ်သဖြင့် သူတို့ မိသားစုအတွက် အပန်းဖြေရန် အချိန် ၅ ရက်ခန့် ဆက်တိုက်ရ၍လည်း ဤခရီး ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးအောင်မော်က “မော်-ဘစ်စနက်ဂရု(ပ်)” ၏ ပိုင်ရှင်၊ အောင်မြင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်။ ကြွယ်ဝမှုက အဆမတန်။ သူ့အသက်က ၄၇ နှစ်။ အခုရောက်နေသည့် အပန်းဖြေ အိမ်ကြီးနှင့်အတူ ၅ ဧကလောက် အကျယ်အဝန်းရှိသော ကမ်းခြေမြေကို ကိုယ်ပိုင် ပရိုက်ဗိတ်ဘိ(ရှ်) အနေဖြင့် ဝယ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အားလပ်ရက် အထိုက်အသင့်ရတိုင်း ဤနေရာသို့ လာနားလေ့ရှိသည်။
ဦးအောင်မော်၏ မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ သူ၏ ဇနီးချော ၃၉ နှစ် အရွယ်ရှိ ဒေါ်အေမီကြိုင် ၊ သားဖြစ်သူ တေဇာမော် ၊ သူက ၁၉ နှစ်သား နှင့် ၁၇ နှစ်အရွယ် သမီးဖြစ်သူ ရွှန်းရတီမော်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ တေဇာက GTC ဒုတိယနှစ် တက်နေပြီး အငယ်မ ရွှန်းရတီက ၁၀ တန်းအောင်အပြီး တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်တက်ရန် စောင့်နေသူ ဖြစ်သည်။ သူမက ကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ် တက်ရမည်ဟု သိပြီးဖြစ်လေသည်။
သူတို့ ဝယ်ထားသော ကမ်းခြေ ခြံကြီးက ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင်တို့မှ တောင်ဘက် အနည်းငယ် ဆက်ဆင်းသွားရသေး၏။ ခရီးဆုံး၍ သူတို့ မိသားစု အိမ်ကြီးဆီရောက်တော့ နေ့လည် နှစ်နာရီကျော်ချေပြီ။
အိမ်ကြီးကို ကြည့်ရှုထိမ်းသိမ်းရန် လစာပေး ငှားရမ်းထားသော ဘကြီးထွန်းက အသင့် စောင့်ကြိုနေသည်။ အထုပ်အပိုးများကို ကူချပြီး အထဲသွင်းပေးသည်။ သူဌေးမိသားစု လာမည်ဆိုသဖြင့် အိမ်ကြီးကို သန့်ရှင်းထားပြီး၊ လိုအပ်မည့် အစားအသောက်၊ ပစ္စည်းပစ္စယများကို လိုလေသေးမရှိ ပြည့်စုံအောင် စီမံထားပြီးဖြစ်သည်။ အားလုံးပြည့်စုံနေပြီ ဖြစ်သဖြင့် ဦးအောင်မော်က…
“ဘကြီးထွန်းရေ… အကုန်လုံး ပြည့်စုံအောင် စီစဉ်ထားပေးတာ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားလဲ ကျနော်တို့ကိုစောင့်ရင်း မနက်ကတည်းက စီစဉ်စရာအလုပ်တွေ လုပ်နေရတာ မောနေရော့မယ်၊ ပြန်နားချင် နားလို့ရပါပြီ”
“ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး..၊ လိုတာရှိရင် ကျနော့်ကို ဖုန်းသာလှမ်းဆက်လိုက်ပါ၊ ချက်ချင်း လာခဲ့ပါမယ်၊ ဒါဆိုရင် ကျနော့်ကို ခွင့်ပြုပါဦး ဆရာကြီး”
“ရပါတယ် ဘကြီးထွန်း… သွားပါ”
အချိန်က ညနေစောင်း နေချိုချိန်သို့ပင် ရောက်ခဲ့လေပြီ။ မိသားစုအားလုံး ယင်းတို့၏ ပရိုက်ဗိတ်ဘိရှ် ကိုယ်ပိုင်ကမ်းခြေ ပတ်ဝန်းကျင် သဲသောင်ပြင်တွင် အနားယူရင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဟေးဟေးဟားဟားနှင့် ရေဆင်းကစားကြသည်။ ကိုယ်ပိုင်ကမ်းခြေ ဖြစ်သဖြင့် အတော်ပင် တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်လှလေသည်။ ထိုနေရာတဝိုက်တွင် လူမရှိသလောက် ဖြစ်သည်။ အနီးဆုံး ကမ်းခြေ ရီစို့တ်ဟော်တယ်သည်ပင် အတော်ဝေးသေးသည်။ ခပ်လှမ်လှမ်းမှာ ပျပျသာ မြင်ရ၏။
လူအများ ဆော့ကစားကြရာ အများသုံး ကမ်းခြေများနှင့် စားသောက်ဆိုင်များ၊ ပစ္စည်းအသုံးအဆောင် အရောင်းဆိုင်များမှာ အတန်ဝေးသေး၍ သွားရောက်လိုလျှင် ကားမောင်းပြီး သွားမှရပေမည်။ သို့သော် ဈေးဆိုင်တွေနှင့် ဝေးခြင်းက သူတို့ မိသားစုအတွက် အဓိက ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ လိုတာအားလုံး ပြည့်စုံ ပိုလျှံစွာ စီမံထားရန် ဦးအောင်မော်က ဘကြီးထွန်းအား မှာကြားထားပြီး မဟုတ်လား။
ဘကြီးထွန်းမှာ သူတို့ခြံကြီးနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်း ကမ်းခြေ ဧရိယာအပြင်ဖက် ရာဘာခြံကြီးထဲတွင် နေသည်။ ခြံလုပ်ငန်းလည်း တစ်ဘက်က လုပ်သည်။ ဦးအောင်မော်က သူတို့အိမ်ကြီးကိုပါ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးရန် ငှားရမ်းထားပြီး အရေးအကြောင်းရှိလျှင် ရန်ကုန်မှလှမ်း၍ မှာကြားဆက်သွယ်နိုင်ရန် ဟန်းဖုန်းတစ်လုံးကိုပါ ပေးထားလေသည်။
ညဦးပိုင်း မှောင်ရီပျိုးတော့ မိသားစုမှာ ကမ်းခြေတွင် camping စခန်းချ၍ မီးဖိုပြီး sea food ပင်လယ်စာများကို ကင်လိုကင် ဖုတ်လိုဖုတ်ဖြင့် စိတ်ကြိုက်စားသောက်ကြတော့၏။ ဆိုရှယ်ကျသော သူဌေးမိသားစုပီပီ၊ ဦးအောင်မော်က ဈေးကြီးသော နိုင်ငံခြားဖြစ် ဝီစကီ၊ ကျန်သားအမိ သုံးယောက်က ဘီယာများသောက်လျက် ဟောလီးဒေး စည်းစိမ်ကို ခံစားကြတော့၏။ ပင်လယ်လေ တဖြူးဖြူး၊ လှိုင်းရိုက်ခတ်သံ တဖြတ်ဖြတ် ကြားတွင်၊ မီးပုံဘေး၌ လတ်ဆတ်သော ပင်လယ်စာကို ကိုယ်တိုင် ကင်စားလိုက် ဘီယာလေး ကျိုက်လိုက်ဖြင်၊ ဟန်ကျနေကြသည်။
ဘကြီးထွန်းနှင့်အတူ သူ၏ သမီးငယ်လေးဖြစ်သူ ကြာဖြူကလည်း လာရောက်ကြည့်ရှုပေးပြီး သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေရန် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြလေသည်။ အစားအစာများ ကင်ရန်အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်စေရန်၎င်း၊ ဆော့စ်များ၊ အချဉ်ရည်များ ဖျော်စပ်ပေးခြင်းတို့ကို၎င်း၊ ပန်းကန် ခွက်ယောက်များ ချပေးခြင်းတို့ကို၎င်း ကူလုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ကြာဖြူမှာလည်း ရွှန်းရတီနှင့် ရွယ်တူ ၁၇ နှစ်ခန့် ရှိပေပြီ။
အားရပါးရ စားသောက်ကြ၍ ဗိုက်တင်းကုန်ကြသောအခါ အချိန်မှာ ည ၉ နာရီခန့် ရှိခဲ့ပြီ။ အားလုံး အိမ်ကြီးဆီသို့ ပြန်ရွှေ့လာခဲ့ကြပြီး ဧည့်ခန်းမကြီးထဲတွင် TV ကြည့်ကြသည်။ ဦးအောင်မော် ဈေးကြီးပေး၍ မရမက ဆက်သွယ် တပ်ဆင်ထားသဖြင့် စကိုင်းနက် ကေဘယ်တီဗွီကို ကြည့်နိုင်လေသည်။ ဘကြီးထွန်းနှင့် သမီးဖြစ်သူ ကြာဖြူမှာတော့ ပစ္စည်းပစ္စယများကို နေရာတကျဖြစ်အောင် ကူ၍ သိမ်းဆည်းပေးပြီးမှ သူတို့၏ အိမ်ရှိရာ ခြံထဲသို့ တက်သွား၏။
ည ၁၀ နာရီ ကျော်ခဲ့လေပြီ။ အားလုံး ခရီးလည်းပန်း ဗိုက်လည်း ပြည့်နေကြပြီ ဖြစ်သဖြင့် အိပ်ခန်းအသီးသီးသို့ ဝင်ပြီး အိပ်ကြရန် တာစူကြသည်။ ထိုအချိန်တွင်ပင် အိမ်ရှေ့မှ တံခါးခေါက်သံ ခပ်ကျယ်ကျယ်က ပေါ်ထွက်လာသည်။ သူတို့ စိတ်ထဲတွင် ဘကြီးထွန်းသော်၎င်း၊ ကြာဖြူသော်၎င်း ကိစ္စတစ်ခုခု ကျန်ခဲ့၍ ပြန်လာခြင်း ဖြစ်မည်ဟု ထင်မိကြ၏။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အေမီကြိုင်က လျှောက်သွားပြီး တံခါးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။
တံခါးဟ ပွင့်သည်နှင့် လျှပ်တစ်ပြက်အတွင်း အံ့သြချိန် မရလိုက်မီမှာပင် မျက်နှာတွင် ခေါင်းစွပ်မည်းများ စွပ်ထားသော ယောကျ်ားသုံးယောက် တံခါးကို ဆောင့်တွန်းလျက် ဝင်လာကြသည်။ ၎င်းတို့ လက်ထဲတွင်လည်း သေနတ်ကိုယ်စီနှင့်။ တစ်ယောက်က ဒေါ်အေမီကြိုင်ကို လည်ကိုသိုင်း၍ ဆွဲချုပ်ထားလိုက်ပြီး သေနတ်နှင့် ခေါင်းကို တေ့ထားလိုက်သည်။ ရုတ်တရက် ဖြစ်ပျက်သွားသော အခြေအနေကြောင့် ဦးလူမော်တို့ တစ်မိသားစုလုံး၊ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားကြသည်။
ဦးအောင်မော် သတိဝင်လာလာခြင်း လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုကိုပြုပြီး သူ့ခရီးဆောင် အိတ်ထဲမှ လိုင်စင်ဖြင့်ကိုင်သော သူ့သေနတ်ကို ပြေးဆွဲမည် ကြံသော်လည်း နောက်ပြောင်းဝ တစ်ခုက သူ့ကို ချိန်လိုက်သဖြင့် ထိုအကြံကို လက်လျှော့လိုက်ရ၏။
“မင်းတို့က ဘယ်သူတွေလဲ၊ ဘာလိုချင်လို့လဲ”
ဦးအောင်မော် အနည်းငယ် စိတ်တည်ငြိမ်လာချိန်မှာတော့ သတိကပ်လာပြီး မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်။ မျက်နှာဖုံးစွပ်သမားတွေက သူမေးတာကို မဖြေ၊ သူတို့ကိုသာ ဆိုဖာရှည်ကြီးပေါ်တွင် ကျောမှီဘက် မျက်နှာပြု၍ မှောက်ထိုင်ထိုင်ခိုင်းသည်။ ပြီးတော့ ဦးအောင်မော်နှင့် တေဇာမော်တို့ကို အသင့်ပါလာသော ကြိုးများဖြင့်၊ လက်ပြန်ကြိုးတုပ် ချည်လိုက်ကြလေသည်။ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်ကိုတော့ ကြိုးမတုပ်၊ သို့သော် အခန်းအလယ်တွင်စု၍ ကပ်ထိုင်ခိုင်းထားသည်။
“တစ်ယောက်မှ မလှုပ်ကြနဲ့၊ ခုခံဖို့ မကြိုးစားကြနဲ့နော် တခုခုကြံဖို့ နဲနဲလေး လှုပ်တာနဲ့ အူပွင့်သွားအောင် ပစ်ထည့်လိုက်မယ်။ တကယ် မလုပ်ဘူး မထင်နဲ့”
သေနတ်သမား တစ်ယောက်က ဟိန်းဟောက်သည်။
“ရှင်… ရှင်တို့ ဘာပစ္စည်းလိုချင်သလဲ ရှိတာတွေ အကုန်ယူသွားကြပါ။ ဒါပေမယ့် လူတွေကိုတော့ ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ရှင်”
ဒေါ်အေမီကြိုင်က ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့် တုန်ယင်နေသော အသံဖြင့် ဓားပြလားမသိ၊ အနုကြမ်းလား မသိသည့် လူဆိုးအုပ်စုကို တောင်းပန်နေသည်။
“မင်းကြောက်နေဖို့ မလိုပါဘူး မရွှေချောရယ်၊ ပစ္စည်းတွေကိုလား… ငါတို့ ယူသွားပြီး ဝေသုံးကြမှာ ကျိန်းသေတာပေါ့၊ မယူမှာ မပူနဲ့၊ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီမတိုင်မီ ငါတို့တွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး အရင်ကစားကြရအောင်ပါ”
ဦးအောင်မော် အကဲခတ်ကြည့်ရသလောက် ဒီလူက အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲ ဖြစ်ရမည်။ တချိန်လုံး သူတစ်ယောက်ပဲ ဦးဆောင်ပြီး ပြောနေတာကိုး။ နောက်နှစ်ယောက်ကတော့ ဘာစကား တစ်ခွန်းမှ မဟပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ သေနတ်ကိုင်ပြီး မျက်ခြေမပြတ် ချိန်ထားတာပဲရှိသည်။
“အမယ်..မယ်.. ကြည့်စမ်း.. မယ်တော်ကလည်းလှ၊ သမီးတော်ကလည်း ချစ်စရာလေး..၊ ဟား ဟားးးး”
“မင်းတို့ ဘာလုပ်ကြမလို့လဲ..? မလုပ်နဲ့နော်..”
ဦးအောင်မော်က အလောတကြီး ဟန့်လိုက်၏။
“ခင်ဗျား ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းပါ၊ တော်ကြာနေရင် ခင်ဗျား ကြိုက်သွားလိမ့်မယ်… ဟေ့.. အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အဝတ်တွေ အကုန်ချွတ်ချစမ်း”
ခေါင်းဆောင်ကတော့ ဆက်၍ အော်ဒါပေးနေလေသည်။ ဒေါ်အေမီကြိုင်နှင့် သမီးဖြစ်သူ ရွှန်းရတီတို့မှာ လူဆိုးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်၏ အမိန့်စကားကြောင့် ကြောက်လဲကြောက် ဘာလုပ်ရမှန်း မသိပဲ ဖြစ်နေသည်။
“မလုပ်ပါနဲ့ရှင်… တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျမတို့ကို ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့”
လူဆိုးထံမှ အဖြေစကားသံအစား ဦးလူမော်ထံသို့ လျှောက်သွားပြီး သေနတ်ဒင်ဖြင့် မျက်နှာကို ဖောင်းကနဲ ခပ်ပြင်းပြင်း လွှဲရိုက်လိုက်ရာ ဂျိုစောင်းမှ သွေးများ ဖြာကျလာလေသည်။ ပြီးလျှင် သေနတ်ပြောင်းဖြင့် နားထင်သို့ တေ့ထားလျက်..
“ကောင်းကောင်းပြောလို့ ရမလား…၊ ဒါမှမဟုတ် ငါ အကြမ်းနည်း သုံးရမလား၊ မချွတ်ရင် နင့်လင်ကို အခုတစ်ခါထဲ ပစ်ချလိုက်ရမလား…”
“မ..မ..မပစ်ပါနဲ့ ချွတ်ဆို.. ချွတ်ပါ့မယ်”
အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်မှာ ရွေးချယ်စရာ လမ်းမရှိတော့ပေ။ သူမတို့မှာ အဝတ်များကို တစ်စခြင်းစီ ရှိုးတိုးရှန့်တန့် စိတ်မသက်သာစွာဖြင့် ချွတ်ချနေရလေသည်။ ရှက်ကလည်း ရှက်သည်။
ပထမ၌ သူမတို့နှစ်ယောက် အပေါ်အောက် အတွင်းခံများ ဖြစ်သည့် ဘရာနှင့် ပင်တီများကို မချွတ်သေးပဲ ပေကပ်နေကြသေးသည်။ သို့သော် လူဆိုးခေါင်းဆောင်က တစ်စမကျန် ချွတ်ပစ်ရန် ခပ်ထန်ထန်ပင် အမိန့်ပေးလေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ဘယ်လိုမှ မငြင်းဆန်နိုင်တော့ပဲ သားအမိနှစ်ယောက်တို့မှာ ဧည့်ခန်းအလယ်တွင် ကိုယ်လုံးတီး အဖွေးသားဖြင့် ပေါင်လေးတွေ တုပ်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ အရှက်ကိုကွယ်ကာ ထိုင်နေကြရရှာသည်။ ဓားပြအဖွဲ့၏ မျက်လုံး သုံးစုံက သူတို့သားအမိ၏ ဝတ်လစ်စလစ် ခန္ဓာကိုယ်များကို မျက်လုံးများ ကျွတ်ကျလုမတတ် ကြည့်နေကြလေသည်။
ဒေါ်အေမီကြိုင်မှာ အသက် ၄၀ နီးပါး ရှိနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း ရုပ်ရည်နှင့် ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားမှာ လှပနေဆဲဖြစ်၏။ ဆိုရှယ်ကျသော မိသားစုမှ ဖြစ်၍ gym သို့သွားပြီး အမြဲ ဖစ်တ်နက်စ် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ အေရိုးဗစ် အမြဲကစားခြင်းတို့ကြောင့် အခုမှ ၃၀ ကျော်ကျော် အပျိုကြီး တစ်ယောက်ကဲ့သို့ ထင်ရ၏။ ကျားတကာမြင်လျှင် သွားရည်ကျစရာ အကိတ်ကြီး ဖြစ်လေသည်။
အထူးသဖြင့် ဖွံ့ထွားလှသော နို့အုံကြီး တစ်စုံက တင်းရင်း တုန်ခါလျက်ရှိပြီး မြင်ရသူအဖို့ သတ္တဝါတို့အဖို့ ရမ္မက်ကြွ၍ ချချင်စရာကြီး ဖြစ်လေသည်။ ပေါင်ခြံကြားမှ ငရုတ်ဆုံကြီးကလည်း အကြီးစားဆိုဒ်ကြီး ဖြစ်ပြီး စောက်မွှေးအုံထူထူကြီးက ဖုံးလွှမ်းထား၏။ ဘယ်ကျည်ပွေ့မဆို လက်ခံ အထောင်းခံနိုင်မည့် ဆိုဒ်ကြီးပင်။
သမီးဖြစ်သူ ရွှန်းရတီမော်ကတော့ ယခုနှစ်တွင် မြီးကောင်ပေါက်မလေး အဖြစ်မှ အပျိုဖားဖား ဖြစ်လာပြီ ဖြစ်သဖြင့် နို့အုံလေးမှာ အတန်ငယ် ပြည့်ဖြိုးလာပြီ ဖြစ်သော်လည်း သိပ်အထွားကြီး ကန်ထွက်နေသည်မဟုတ် အနေတော် ကြည့်ကောင်းရုံပင် ဖြစ်သည်၊ သို့သော် ဆက်စီကျလှ၏။ ပေါင်ကြားမှ နှုတ်ခမ်းသား ပိပိလေးနှင့် တန်ဆာဆင်ထားသော ရှပ်တာတံခါးချပ်လေးပေါ်တွင် အမွှေးပါးပါးလေးများ ယှက်ဖုံးနေသည်။ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက ပန်းနုရောင် လွလွလေးတွေ ဖြစ်၏။
“ခြေထောက်တွေ ဘေးကားပြီး ပေါင်ဖြဲလိုက်စမ်း”
ဓားပြခေါင်းဆောင်က ဒေါ်အေမီကြိုင်ဆီသို့ လျှောက်သွားပြီး အမိန့်ပေးလိုက်ပြန်သည်။
“အို..အမလေး.. ကျမကို ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ရှင်၊ ကျမ.. မလုပ်နိုင်ဘူး”
“ရတယ်လေ၊ ဒီလိုဆိုလဲ နင့်အစား နင့်သမီးကိုပဲ လုပ်ခိုင်းရမှာပေါ့”
ဓားပြက ပြောရင်းနှင့် တပြိုင်တည်း ရွှန်းရတီဘက်သို့ လှည့်သွားလေတော့ရာ..
“သ..သမီးကိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ရှင်၊ ကျ..ကျမ သဘောတူပါပြီ”
ဒေါ်အေမီကြိုင်မှာ သမီးကို ချစ်သောစိတ်ကြောင့် ရွှန်းရတီကို အထိမခံနိုင်သဖြင့် ဓားပြ အမိန့်ပေးသည့်အတိုင်း သူမ၏ ပေါင်ကို ဖြဲကားပေးလိုက်လေရာ ဟပြဲလာသော စောက်ဖုတ် အလယ်မှ နီရဲရဲ စောက်ခေါင်းကို မြင်နေရလေပြီ။
ဦးအောင်မော်မှာကား သူ့မိန်းမ အေမီကြိုင်ကို သနားစိတ်ဖြင့် ကြည့်နေရရုံမှတပါး ဘာမှမလုပ်နိုင်၊ မတတ်နိုင်ပေ။ အကယ်၍ တစုံတရာကို သတိကင်းမဲ့စွာ ပြုလုပ်မိပါက၊ သူတို့ မိသားစုများ အသက်သို့တိုင်အောင် အန္တရာယ်ကြီးကြောင်း သိနေ၍ ဖြစ်သည်။ နောက်ပြီး လက်ပြန်ကြိုးကလည်း အတုပ်ခံထားရသေးသည်။
ဓားပြက ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ပြီး ဒေါ်အေမီကြိုင်၏ ပေါင်ခြံကြား၊ ပြဲကားနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးဆီသို့ မျက်နှာအပ်လိုက်လေသည်။ သူက ခေါင်းငုံ့ပြီး စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသား ထူထူကြီးများကို လျှာဖြင့် လိမ်းလှည့်၍ စိမ်ပြေနပြေ လျက်ပေးနေသည်။
ဒေါ်အေမီကြိုင်တစ်ယောက် ထိတ်လန့်ဖွယ် အန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော အခြေအနေ ဖြစ်နေသော်လည်း သူမ၏ ပေါင်ခြံကြားတွင် လိမ်းလှည့်ကစားနေသော လျှာ၏ အရသာနှင့်၊ နို့လုံးကြီးများကို အားရပါးရ ညှစ်နယ်ခံနေရမှုများကြောင့် ကြက်သီး မွေးညှင်းများထလျက်၊ ပြောမပြတတ်သော ဖီလင်တစ်မျိုးကို ခံစားနေရလေတော့သည်။
သဘာဝအရ လိင်အင်္ဂါကို သေချာ မွှေနှောက်ပြီး နှိုးဆွခြင်း လျက်ခြင်း ခံနေရသဖြင့် အော်တိုမက်တစ်ပင် ခံချင်စိတ်များက တရွရွ ပေါ်လာရတော့၏။ သူမ၏ ဖြဲကားပေးထားသော ပေါင်နှင့် ခြေထောက်များမှာ သူမကိုယ်သူမ သတိမထားမိခင်မီမှာပင် တွန့်လိမ်၍ ကားပေးလိုက်၊ ဆွဲစိပေးလိုက်ဖြင့် အချက်ကျကျ တုံ့ပြန်ပေးနေမိတော့သည်။ လည်ချောင်းထဲမှလည်း တိုးညင်းသော ငြီးတွားသံများ စတင်ထွက်လာ၏။
အေမီကြိုင်၏ ဖင်ကြီးများ၊ တင်ဆုံကြီးများက ဘယ်ညာ ရမ်းခါလျက် ရှိချေပြီ။ အဖုတ်ကြီးကို သတိလက်လွတ် ကော့တင်ပေးနေကာ၊ လျှာကစားချက်များကို တုံ့ပြန်ပေးလျက်ရှိသည်။
“အူးးး တော်… တော်ပါတော့၊ ကျ..ကျမ မနေတတ်တော့ဘူး”
ဒေါ်အေမီကြိုင်မှာ ဓားပြခေါင်းဆောင်၏ လျှာစွမ်းပြ လှုံ့ဆော် နှိုးဆွမှုများကြောင့် မနေတတ် မထိုင်တတ်ဖြစ်ကာ ထအော်နေတော့၏။ မျက်စိရှေ့တွင် မြင်နေရသော မြင်ကွင်းနှင့် ကြားနေရသော အသံများကြောင့် အခန်းတွင်းတွင် ရှိနေကြသော လူအားလုံးမှာ စိတ်များ အကြီးအကျယ် လှုပ်ရှားနေကြလေသည်။ ထိုအထဲတွင် တေဇာမော် တစ်ယောက်လည်း အပါအဝင် ဖြစ်လေသည်။
ရှေ့တွင် ဖြစ်ပျက်နေသော သူ့မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အေမီကြိုင်၏ သွေးဆူကြွဖွယ် လှုပ်ရှားတုန့်ပြန်မှု အခြေအနေများကို ကြည့်ပြီး၊ ယခု သူ၏ ပေါင်ကြားမှ ဖွားဘက်တော် ညီငယ်မှာ ထိမ်းကွပ်၍မရပဲ ထကြွနေလေပြီ။
ဒေါ်အေမီကြိုင် တစ်ယောက်မှာလည်း ဓားပြကောင်၏ အစွမ်းပြမှုကို အလိုက်သင့် တုန့်ပြန်နေမိပြီး ဖင်ကြီးကို ခါရမ်းလှုပ်ရှားပေးလျက်ရှိသည်။ သတိကင်းလွတ်စွာဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ပေ။ စောက်ရည်များမှာလည်း တားမနိုင် ဆီးမရ ထွက်ကျလာတော့သည်။
ဓားပြခေါင်းဆောင်က အေမီကြိုင်၏ ပေါင်ကြားမှ မျက်နှာခွာလိုက်သောအခါ မျက်နှာဖုံးနက် အောက်စပ်မှ ပေါ်နေသော သူ၏ ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းများတွင် အေမီကြိုင်၏ စောက်ပတ်မှ ထွက်လာသော စောက်ရည်များဖြင့် ပေပွလျက်ရှိ၏။ ဓားပြခေါင်းဆောင်က ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ပတ် မျက်စိကစား၍ လိုက်ကြည့်နေသည်။ ပြီးတော့ သူ့မျက်လုံးအစုံက တေဇာမော်ထံ အရောက်တွင် ရပ်သွားလေ၏။
တေဇာမှာ ယခု စိတ်လှုပ်ရှားမှု ကြီးစွာဖြင့် တောင့်တင်းစွာ ထိုင်နေမိလျက်၊ အတွင်းခံ ဝတ်မထားသဖြင့် ဘောင်းဘီဂွကြားမှလည်း သိသိသာသာကြီး ဖု၍ ထောင်ထွက်နေသည်။
“ဟား ဟား ဟား… ဘယ်လိုလဲကွ၊ မင်းအမေကို ဒီပုံနဲ့ မြင်တော့ ထန်လာပြီ မဟုတ်လား၊ ဟားးး လီးတောင်၊ တောင်နေပြီပဲကွ”
တေဇာမော်မှာ ဓားပြ၏ စကားကြောင့် မျက်နှာကြီး အမ်းကာ ရှက်နေ၏။
“ဟုတ်ပေ့ကွာ… ငါမင်းကို သနားတောင်လာပြီ၊ မင်းဆန္ဒတွေကို ကူပြီး ဖြေလျှော့ပေးရတော့မှာပေါ့၊ ငါက သဘောကောင်းပါတယ်။ ကဲ ထရပ်စမ်း”
တေဇာမှာ ဓားပြပေးသည့် အမိန့်အတိုင်း၊ ခြေတုန် လက်တုန်၊ ကုန်းကုန်းကွကွနှင့် ထရပ်လိုက်ရသည်။
“ကဲ.. တစ်ယောက်၊ သူ့လက်ကို ကြိုးဖြေပေးလိုက်၊ လွတ်လပ်သွားပြီဆိုပြီး ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ်လုပ်ဖို့ မကြံနဲ့နော်၊ မနက်ဖြန် မနက်စာ ထမင်းမစားရပဲ ဖြစ်သွားမယ်”
ဓားပြတစ်ယောက်က တေဇာ့ကို ချည်ထားသည့် လက်ပြန်ကြိုးကို ဖြေပေးလိုက်သည်။
“ကဲ.. မင်းဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်စမ်း၊ ပြီးရင် ဒီကိုလျှောက်လာလိုက်”
တေဇာမှာ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ရန် ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေသည်။
“ဟေ့ကောင်… ချွတ်ဆို.. မချွတ်သေးဘူးလား..”
ဓားပြခေါင်းဆောင်က ကြမ်းတမ်းသော အသံဖြင့် သေနတ်ရမ်းပြီး ဟိန်းဟောက်လိုက်သောအခါ တေဇာမှာ မတတ်နိုင်တော့ပဲ သူ၏ ဘောက်ဆာဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်ရပြီး အခန်းအလယ်သို့ လျှောက်လာခဲ့ရ၏။
“မင်းအမေ ရှေ့တဲ့တဲ့မှာ ရပ်လိုက်စမ်း…”
တေဇာမှာ အမိန့်ပေးသည့်အတိုင်း လိုက်လုပ်နေရသည်။ တေဇာမော်၏ တောင်မတ်နေပြီ ဖြစ်သော ၆ လက်မ ၇ လက်မ ဆိုဒ်လောက်ရှိမည့် လီးကြီးက အမေဖြစ်သူ ဒေါ်အေမီကြိုင် ကြုံ့ကြုံ့ထိုင်နေသည့်ရှေ့၊ မျက်နှာနားတွင် တဝဲဝဲ ဖြစ်နေသည်။
ဒေါ်အေမီကြိုင်မှာ သူမ၏ မျက်နှားနားတွင် ရမ်းတမ်ရမ်းတမ်း ဖြစ်နေသော ဟာကြီးကို ကြည့်၍ မင်သက်နေမိသည်။ လူပျို ပေါက်စလေး ဖြစ်ကတည်းက မမြင်ခဲ့ရသော သူမသား၏ ပစ္စည်းမှာ ဒီလောက်ကြီးထွား ကြိုင်းလာလိမ့်မည်ဟု တစ်ခါမှ မတွေးထင်ခဲ့ဖူးပေ။ ဒစ်ထိပ်ကြီးမှာ ပြူးပြဲလန်ထွက်နေ၏။
“ကဲ…ဟေ့ကောင်.. ခုနငါလုပ်တာကို မင်းကြည့်ထားတယ် မဟုတ်လား၊ မခက်လောက်ပါဘူး။ သွား… ခုနက ငါလုပ်တဲ့အတိုင်း မင်းအမေကို သွားလုပ်စမ်း၊ တို့က လိုက်ဗ်ဗွီဒီယို ကြည့်ကြမယ်..”
“မ..မ..မလုပ်ပါနဲ့ရှင်၊ ကျမကို ရှင်တို့ ဘာလုပ်လုပ်၊ ကြိုက်သလို လုပ်ပါရှင်။ ဒါပေမယ့် ကျမသားနဲ့တော့ အဲ့ဒီလို ပေးမလုပ်ခိုင်းပါနဲ့.. ရှိကြီးခိုးပါရဲ့…”
ဒေါ်အေမီကြိုင်မှာ ငိုမတတ် တောင်းပန်နေသည်။ သို့သော် ဓားပြက နားဝင်ပုံမရပေ။ တေဇာမော်ကို ဂုတ်မှကိုင်ဆွဲယူလာ၍ အမေဖြစ်သူ အေမီကြိုင်၏ ပေါင်ကြားတွင် ထိုင်ခိုင်ပြီး
“မြန်မြန်လုပ်.. မင်းအမေကို ကောင်းကောင်း ပြုစုပေးလိုက်စမ်း၊ မလုပ်ရင် သေဖို့သာ ပြင်ပေတော့”
တေဇာက သူ့အမေ၏ မျက်နှာကို ကြေကွဲစွာ ကြည့်နေသည်။ မျက်လုံးအစုံက သူ့ကို ခွင့်လွှတ်ရန် တောင်းပန်နေသလို။ သူ့မှာ ရွေးချယ်စရာ လမ်းမရှိတော့ပေ။ စိတ်ကလည်း နှစ်ခွ ဖြစ်နေသည်။ နောက်စိတ်တစ်မျိုးက သူ့ရှေတွင် ဟပြဲကြီး ဖြစ်နေသော သူ့အမေ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို ကုန်း၍ လျက်ပစ်လိုက်ချင်စိတ်က တားမရအောင် ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းပင်။ ဒေါ်အေမီကြိုင်က အခြေအနေကို မယုံနိုင်သေးသလိုဖြင့် သားဖြစ်သူကို ပြူးပြဲ၍ ကြည့်နေ၏။
“သားကို ခွင့်လွှတ်ပါ မေမေ”
တေဇာ ဤဝါကျကို နောက်ဆုံး ပြောလိုက်ပြီး သူ့အမေ၏ စောက်ပတ်ကြီးဆီသို့ မျက်နှာအပ်လိုက်လျက်၊ လျှာကိုထုတ်၍ စောက်ပတ်ကြီးကို လျက်လိုက်သည်။ ဒေါ်အေမီကြိုင်မှာ ကြက်သီးမွေးညှင်း တဖြင်းဖြင်း ထသွားလေသည်။ တေဇာသည် သူ့အမေ၏ စောက်ပတ် နှစ်ခြမ်းကို လက်ဖြင့် ကိုင်ဖြဲလျက် စောက်ရည်များဖြင့် ရွှဲအိနေပြီးဖြစ်သော စောက်ခေါင်းထဲသို့ သူ၏ လျှာကို ထိုးသွင်း ကစားလိုက်တော့သည်။
တေဇာမှာ ဂွင်းထုရုံမှလွဲ၍ မိန်းမနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်ခါဆို တစ်ခါမှ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် အတွေ့အကြုံ မရှိဘူးသေးပေ။ ခပ်ငြိမ်ငြိမ် အပေါင်းအသင်းတွေပဲ ရှိ၍လားမသိ၊ မာဆတ်တို့၊ ကေတီဗွီတို့၊ ဖာဘိတို့ မသွားဘူးသေး။ လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံ မရှိသော်လည်း ငပိန်းလေး တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါချေ။ အိုင်တီခေတ် လူငယ်ပီပီ အင်တာနက်မှတဆင့် အောစာ၊ အောပုံ၊ အောကားများ နောကျေအောင် ကြည့်ဖူးပြီး ဖြစ်သဖြင့် တက်ကနစ် မျိုးစုံကို မျက်စိယဉ်နေပြီ။ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့တွင် ဘယ်လိုလုပ်ရမည် ဆိုသည်ကို သူ့အတွက် အခက်အခဲကြီး တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပေ။
တေဇာမှာ တကယ့်လက်တွေ့ စောက်ပတ်စစ်စစ်၊ အမှန်အကန်ကြီးကို ထိတွေ့ သုံးသပ်ခွင့်ရလိုက်သောအခါ၊ တစ်ကိုယ်လုံး တရှိန်းရှိန်း ပူလောင်လာ၏။ သူအခု လျက်နေ၊ ကုန်းစုပ်နေသော၊ စောက်ပတ်ကြီး၏ ပိုင်ရှင်မှာ သူ့ကို မွေးထားသော အမေအရင်းကြီးဆိုတာ သိသိကြီးနှင့်ပင် စိတ်တွေ ဆူလောင်ပြီး ကာမရမ္မက်သွေးများ ပွက်ပွက်ထလာလေသည်။
“အားအဟင်း..ဟင်း…တေဇာ.. သားရယ်။ ဘယ်လိုတွေ လုပ်နေတာလဲ…၊ တော်ပါတော့.. ရပ်တော့… အားးးးး မေမေ မနေတတ်တော့ဘူး…”
တေဇာက အခုအချိန်တွင် ဘယ်လိုတားတား ရမည့်ပုံ မပေါ်တော့ပါ။ သူ့အမေ စောက်ပတ်ကြီးအား စိတ်ရှိလက်ရှိ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆွဲစုပ်၊ ထိုးလျက် နေလေသည်။
တေဇာမော်က သူ့အမေကို ကောင်းကောင်း ဘာဂျာပေးနေသည်ကို ဓားပြအုပ်စုက အရသာခံ ကြည့်နေစဉ်၊ တစ်စုံတစ်ခုသော လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဓားပြများ အာရုံပြောင်းပြီး အကြည့်များက ရွှန်းရတီဆီသို့ ရောက်သွားကြ၏။ ရွှန်းရတီမှာ ယခု အခန်းအလယ် သူ့အမေနှင့် သူ့အစ်ကိုဖြစ်သူတို့ နှစ်ပါးသွားနေသော နေရာနှင့်ဆိုလျှင် အနီးဆုံး နေရာမှာ ရှိသည်။ ဓားပြများက ရွှန်းရတီတစ်ယောက် ခြေထောက်ချင်းလိမ်၊ ပေါင်ချင်းလိမ်ပြီး မချင့်မရဲ တွန့်လိမ်နေသည်ကို တွေ့သွားလို့ ဖြစ်သည်။
သူ့အစ်ကိုဖြစ်သူ တေဇာက သူ့အမေ အေမီကြိုင်ကို စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဘာဂျာပေးနေပုံများ၊ သူ့အမေက စိတ်လိုလက်ရ ပေါင်ကြီးတွေ ထောင်ကားပေးထားပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဖြဲပေးထားပြီး ဖီလင်အပြည့်ဖြင့် အော်ညည်းနေသံများနှင့် သူ့အစ်ကို၏ တဆတ်ဆတ် တုန်လျက် တောင်မတ်နေသော လီးချောင်းကြီးကို အနီးကပ် မြင်နေရသဖြင့် ရွှန်းရတီမှာ သူ့စိတ်ကို သူငြင်းဆန်၍ မရအောင် စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပြီ ဖြစ်သည်။ ရာဂစိတ်များ ထိန်းမရအောင် ထကြွလာ၏။ မထိန်းနိုင် မသိမ်းနိုင် သူမ၏ ပေါင်ကြားတစ်ခုလုံး စိုရွှဲလာသည်ကိုလည်း မိမိကိုမိမိ သတိထားမိသည်။ ထိုအခြင်းအရာကို မြင်သော ဓားပြများက….
“ဟဲ့ကောင်မလေး၊ အဲဒီမှာပဲ ဘာလို့ထိုင်နေမှာလဲ၊ ဒီကိုလာခဲ့… လာ”
သူတို့က ရတီ့ကို ဆွဲခေါ်ယူလာခဲ့ပြီး၊ ဦးအောင်မော်၏ ရှေ့တွင် ထိုင်လိုက်စေသည်။
“နင့်အဖေကို နဲနဲလောက် ကူညီပေးလိုက်ပါလား”
ဦးအောင်မော်မှာ မျက်နှာကြီးနီ၊ မျက်လုံးကြီး ပြူးလျက် အတင်းရုန်းကန်ပြီး၊
“မလုပ်နဲ့နော်.. အဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ မဖြစ်ဘူး၊ ကျုပ် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ”
“ခင်ဗျား ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း ဘဲကြီး၊ တော်ကြာနေ ကြိုက်လွန်းလို့ လျှာလည်သွားမယ်”
ပြောပြောဆိုဆို ဓားပြများက ဦအောင်မော်ကို ဝိုင်း၍ ဘောင်းဘီ ဆွဲချွတ်ချပေးလိုက်ကြသည်။
“ဟား ဟားးးးး ဒီမှာကြည့်ကြစမ်း.. ပြောတော့ မလုပ်နဲ့.. မလုပ်ပါနဲ့တဲ့၊ လီးက တာဝတိ့သာကို ရောက်နေပြီ။ လာခဲ့.. နင့်အဖေဟာကြီးကို စုပ်ပေးလိုက်စမ်း.. လိပ်လို နှေးမနေနဲ့ .. မြန်မြန်”
ဓားပြက ရွှန်းရတီကို သေနတ်ပြောင်းဖြင့် တွန်း၍ အတင်းခိုင်းနေသည်။ ရတီမှာ အဖေဖြစ်သူ ဦးအောင်မော် မျက်နှာကို မော့ကြည့်၏။ မျက်လုံးတွေက မျက်ရည်တွေ စီးကျလျက်။ သူမမှာ ငြင်းပယ်နိုင်ရန် စွမ်းအား မရှိတော့ပေ။ သေနတ်ပြောင်း ၃ ခုက သူမ၏ မိသားစုဝင်များကို ချိန်ထားသည်လေ။
သူမရင်ထဲတွင် အကြီးအကျယ် စိတ်ထိခိုက်မှုနှင့် ကြောက်ရွံ့မှုများက ကြီးစိုးနေပေမယ့်၊ သံဒုတ်ကြီးကဲ့သို့ မာကြောပြီး ထွားကျိုင်းလှသော အဖေ့ လီးတံကြီးက မျက်နှာရှေ့တွင် တရမ်းရမ်း ရှိနေသောအခါ၊ သူမ၏ နှလုံးသားမှာ ပြုတ်ထွက်လုမတတ် ခုန်ပေါက်လျက်ရှိ၏။ ပူလောင်ဆူပွက် ဖိအားမြင့်မားလှသော သွေးများက တစ်ကိုယ်လုံး လှည့်ပတ် စီးဆင်းနေတော့သည်။
နောက်ဆုံး ရွှန်းရတီမှာ အလိုအလျောက်ပင် ကိုယ်ကို ငုံ့ကိုင်းလျက်၊ သူမ၏ ပန်းနုရောင် နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို အဖေဖြစ်သူ ဦးအောင်မော်၏ ဒစ်ဖူးကြီးနှင့် ညင်သာစွာ ထိလိုက်ပြီး ပါးစပ်လေးဟ၍ ငုံလိုက်တော့ရာ၊ နဲနဲချင်း၊ နဲနဲချင်းဖြင့် လီးတံကြီးမှာ ပါးစပ်နွေးနွေးလေးထဲတွင် ကုန်လုနီးပါး ဝင်ရောက် ပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်။
“အို… အဖေ့ သမီးလေးရယ်…၊ ဖေဖေ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါကွာ”
ဦးအောင်မော်မှာ မချိတင်ကဲ ရေရွတ်ရင်း မျက်လုံးများကို မှိတ်ထားမိလေသည်။ သူ့အချစ်ဆုံး သမီးငယ်လေးက သူ့လီးကြီးကို ငုံစုပ်နေသည်ကို မမြင်ချင်၊ မကြည့်ရက်၍ ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူ့သမီး၏ နှုတ်ခမ်းပါးလေးနှင့် အာခေါင် နွေးနွေးလေးတို့၏ အထိအတွေ့ကြောင့် သူ၏လီးကြီးမှာ သမီး၏ ပါးစပ်ထဲတွင်မှာပဲ၊ ပိုပြီး ကြီးထွားမာထန်လာခဲ့သည်။ ဘယ်လိုမှ ထိန်းကွပ် ချိုးနှိမ်လို့ မရတော့ချေ။
“ဒီမှာကြည့်.. ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဟ.. ခွီးတဲ့မှ..”
ဓားပြက ရွှန်းရတီ၏ ခေါင်းကို ဖိဖိချပြီး ခပ်သွက်သွက် လှုပ်ရှားစေလေသည်။ ဖိချက်နှင့်အတူ ဦးအောင်မော်၏ လီးကြီးမှာ ရတီ၏ အာခေါင်ထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာ ပို၍ ဝင်ရောက်သွားပြီး တချက်တချက် လည်ချောင်းသွားထောက်သဖြင့် အသက်ရှူရပ်မတတ်ပင်။ မကြာခင်မှာတော့ သူမ အထာသိသွားလေပြီ။ အာခေါင် မထောက်အောင် သက်သက်သာသာ ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလှုပ်ရှားရမည်ကို အလိုလို သိလာ၏။ အဖေလုပ်သူမှာလည်း သမီး၏ ကျွမ်းကျင်စွာ ကစားလာနိုင်မှုကြောင့် ပို၍ ဖီလင်တက် ရမ္မက်ကြွလာပြီး ထွက်လုခမန်း ဖြစ်လာတော့သည်။
ဒေါ်အေမီကြိုင်တို့ သားအမိဘက်မှာလည်း ဓားပြများက အမေဖြစ်သူကို ဆိုဖာပေါ်တွင် ပက်လက် အိပ်စေပြီး သားဖြစ်သူ တေဇာအား အပေါ်မှ တက်ခွပြီးလုပ်ရန် အမိန့်ပေးလျက်ရှိသည်။
“ငါတို့ကြည့်ရအောင် မင်းအမေကို မင်းလိုးပြစမ်းကွာ၊ မြန်မြန်ဟေ့..”
တေဇာမှာ ပထမ၌ မတင်မကျ ဖြစ်နေသေးသော်လည်း ဆူပွက်လာသော ရမ္မက်ဇောကြောင့် အခုသူ့ရှေ့မှာ ကိုယ်တုံးလုံးနှင့် ပက်လက်ကြီး ပေါင်ဖြဲထားပေပြီး သူ၏လီးကို စောင့်နေသော ကိုယ့်အမေကို မြင်နေရသောအခါ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ပဲ လိုးပစ်လိုက်ချင်စိတ်များသာ တဖွားဖွား ပေါ်လာရသည်။
နောက်တစ်ကြိမ် တေဇာက သားအမိဆိုသော နောက်ဆုံး အသိတရားဖြင့် သူ့အမေကို တောင်းပန်လိုက်ပြီးနောက် သူ့ရဲ့ လထစ်ကြီးကို သူ့အမေ အေမီကြိုင်၏ စောက်ခေါင်းဝသို့ တေ့လိုက်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိသွင်းချလိုက်၏။
“သားးး တေဇာ… ဒါ သားမေမေလေ၊ မေမေ့ကို မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်..အားးးးးးး လုပ်လို့မဖြစ်ဘူး…အိုးးး အိ.. အိ..”
အေမီကြိုင်က အော်၍ တားသေးသည်။ သို့သော် တေဇာမော်က ဂရုမစိုက်တော့ပါ။ သူ၏လီးက အမေရင်းဖြစ်သူ ဒေါ်အေမီကြိုင်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ ထိုးခွဲဝင်ရောက်သွားလေပြီ။ နောက်နှစ်ချက်လောက် ဖိသွင်းလိုက်တော့ အဆုံးထိ ဒုတ်ဒုတ်ထိဝင်သွားလေ၏။
တေဇာက တဖြည်းဖြည်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုတွေ မြန်လာပြီး လိုးရှိန်ကို မြင့်လာလိုက်သည်။ အေမီကြိုင်တစ်ယောက်မှာ သားဖြစ်သူ တေဇာရဲ့ အားပါပြင်းထန်သော လိုးချက်များကြောင့် ရာဂဆိပ်များ တက်လာပြီး တောင့်ခံမထားနိုင်တော့ပဲ လိုးချက်နှင့်အပြိုင် ညည်းညူနေတော့သည်။
အခန်း၏ အခြားတစ်ဘက်မှာလည်း သားဖြစ်သူက သူ့အမေရင်းကို အားရပါးရ စိတ်ရှိလက်ရှိ လိုးနေသည်ကို လှမ်းမြင်နေရသော မြင်ကွင်းက၊ ဦးလူမော်အဖို့ မီးတောက်အပေါ် ဓာတ်ဆီလောင်းလိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ကာ ရမ္မက်ရာဂစိတ်ကို ဘယ်လိုမှ ဆက်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သူ့သမီးလေးပါလား ဆိုတာကို လုံးဝမေ့သွားပြီး၊ သမီးဖြစ်သူ ရတီ၏ ပါးစပ်လေးထဲသို့ သူ့လီးကြီးကို အားရပါးရ ဆောင့်ကာဆောင့်ကာ လိုးလျက်ရှိရာမှ သုတ်ရည် ဖြူဖြူပျစ်ပျစ်များကို ပါးစပ်ထဲသို့ အများအပြား အရှိန်ဖြင့် ပန်းထည့်လိုက်လေသည်။
ရွှန်းရတီမှာ သူမ၏ ပါးစပ်ထဲသို့ လရည် စီးစီးပျစ်ပျစ်များ ပန်းဝင်လာသည်ကို ခံစားလိုက်ရသည်နှင့် ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တုန်တက်သွားရသည်။ သူမအဖို့ ဒီလို ညှီစို့စို့ ပျစ်ချွဲချွဲ အရည်များ ပါးစပ်ထဲ ဝင်လာခြင်းကို တစ်ခါမှ မကြုံဘူးသဖြင့် ပျို့တက်လာကာ ချက်ချင်းပင် ထွေးထုတ်လိုက်လေသည်။ သို့ဖြစ်၍လည်း အဖေဖြစ်သူ၏ လရည်များမှာ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ စီးကျ ပေပွလို့ နေသည်မှာ မြင်ရသူများအဖို့ သွေးသားဆူပွက် ဖီလင်တက်စရာ မြင်ကွင်းတစ်ခုပင်….။
အခြားတစ်ဘက်တွင်လည်း ဒေါ်အေမီကြိုင်မှာ သားဖြစ်သူက ပခုံးထမ်းတင်ထားသဖြင့် ခြေနှစ်ချောင်း မိုးမျှော်လျက်ရှိ၏။ တေဇာက သူ့အမေ၏ ပေါင်ဖွေးဖွေးကြီးများကို ပခုံးပေါ်တွင် တင်မှီပြီး ထမ်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးက ပူးကပ်နေပြီး၊ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှ အဖုတ်ကြီးမှာ ညပ်၍ နေသော်လည်း အပြင်ဘက်သို့ အတင်းရုန်းကန်ပြီး နှုတ်ခမ်းထူကြီးများက ပြူးထွက်နေ၏။
တေဇာ၏ လီးကြီးမှာ သူ့အမေ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲတွင် နစ်ဝင်နေလျက် ပြင်းထန်သော ဆောင့်ချက်များနှင့်အတူ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ရှိ၏။ လီးကို ပေါင်ကြားညှပ်ပြီး လိုးနေရသဖြင့် အဝင်အထွက် စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိကာ တေဇာတစ်ယောက် မပြောပြနိုင်လောက်အောင် ကောင်းပြီး လီးဆိမ့်အောင် ခံစားနေရသည်။
“ဗြိ ဗြိ ဗြိ ဗြီ.. ဖတ်.. ဖတ်… ဖတ်.. ဖတ်”
ပေါင်ကြားညပ်နေသော စောက်ဖုတ်ကို လီးဝင်သံက တဗြိဗြိ၊ ပေါင်ကြီးကို ဂွေးဥနှင့် ရိုက်သံက တဖတ်ဖတ်..။
“မေမေ.. မေမေ.. သားးး.. သား.. ကောင်းလိုက်တာ၊ မ..ရ..တော့ဘူး…၊ မနိုင်တော့ဘူးးး အားးးးးး”
တေဇာမှာ သူ့အမေကို လိုးနေရင်း စိတ်လွတ်လက်လွတ် အော်ညည်းနေသည်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘယ်သူတွေရှိနေလဲ၊ ကြည့်နေကြလဲ၊ စိတ်မဝင်စားတော့ပေ။
“မေမေလည်း အရမ်းကောင်းနေပြီ သား၊ အားးး သားလေး.. တေ..ဇာ.. သားလုပ်ပေးတာ ကောင်းလိုက်တာ၊ အမယ်လေး.. ဆောင့်.. ဆောင့်.. သား..ဆောင့်၊ နာနာလိုးပေးပါ အိုးးးး အူးးးး”
ဒေါ်အေမီကြိုင်မှာ အကျယ်ကြီး အော်ညည်းပြီး သူ့ကို အားရပါးရ ဆောင့်လိုးရန် သူကိုယ်တိုင် မွေးထားသော သားအား မရှက်မကြာက် တောင်းဆိုနေမိသည်။ မကြာခင်လေးကမှ ဖြစ်နေခဲ့သော ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုများ၊ အရှက်တရားများ၊ စိတ်မသက်မသာ ခံစားနေရမှုများအားလုံး သူမထံမှ ပျောက်ကွယ်သွားပေပြီ။ ယခု သူမတွင် ဆူလောင် ပြင်းပြသော ရာဂစိတ် တစ်ခုတည်းသာ ကျန်တော့၏။
“အူးးးး မေမေ… သားပြီးပြီ.. ထွက်.. ထွက်ကုန်တော့မယ်.. မေမေ.. သားမိန်းမ ဖြစ်ပြီနော်၊ ဖြစ်ပေးပါနော် မေမေ၊ ယောက်ျား ကောင်းကောင်း လိုးပေးမယ်နော်.. မိန်းမ..”
“အင်း…သားး.. မေမေ့သားလေး၊ မေမေ့ ယောက်ျား၊ လိုး..လိုး.. မိန်းမကို လိုးပေးပါ ယောက်ျားရယ်၊ မိန်းမ ထွက်ကုန်တော့မယ်၊ ပြီးတော့မယ်၊ ယောက်ျား ဆောင့်.. နာနာဆောင့်”
ဒေါ်အေမီကြိုင်မှာ စိတ်လှုပ်ရှား ရိုက်ခတ်မှုများစွာဖြင့် ညည်းတွားရင်း သားဖြစ်သူကို ယောက်ျားချင်းထက်အောင်ခေါ်ပြီး လိုးချက် ဆောင့်ချက်များကို ခါးကောကော့ပေးရင်း စိတ်ပါလက်ပါ အလိုးခံလျက်ရှိတော့သည်။
ဒေါ်အေမီကြိုင်နှင့် သားဖြစ်သူ တေဇာတို့၏ ရမ္မက်စိတ်လှုပ်ရှား တက်ကြွဖွယ် အက်ရှင်များ အသံများကြောင့် မြင်ရသူ ကြားရသူ ဦးအောင်မော်အဖို့ ရာဂစိတ်သွေးများ နောက်တဖန် ဆူဝေလာရပြန်သည်။ ထို့အတူ လီးကြီးကလည်း ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ပြန်တောင်တက်လာလေပြီ။ ပြာဝေသွားသော ကာမ အမှောင်စိတ်ကြောင့် သမီးဖြစ်သူ ရွှန်းရတီကို ဆွဲယူပြီး ဆိုဖာစောင်းတွင် တံတောင်ထောက်၍ လေးဘက်ကုန်းစေလိုက်သည်။ မိမိကိုယ်တိုင်က သမီးဖြစ်သူ၏ နောက်တွင် ဒူးထောက် နေရာယူလိုက်ကာ တဆက်ထဲမှာပင် တောင်နေသော လီးကြီးအား ရတီ၏ စောက်ပတ်ဝလေးသို့ တေ့လျက် ထိုးသွင်းလိုက်တော့သည်။
ဦးအောင်မော်မှာ နောက်ဖက်မှ ဒေါ့ဂီစတိုင်ဖြင့် သမီး၏ စောက်ခေါင်းထဲကို သူ၏လီးကြီးဖြင့် တဖြေးဖြေး နှဲ့လျက်သွင်းနေလေရာ၊ ကျဉ်းမြောင်း ကြပ်ထုပ်လှသောကြောင့်၊ ရတီလေးမှာ နာကျင်စွာ ထအော်လေသည်။
“ဇွိ ဗြစ် ဗလစ်”
“အားးး ကျွတ်ကျွတ်… နာတယ်.. ဖေဖေ ရတီနာတယ်.. အဲဒီအချောင်းကြီးနဲ့ အထဲမထိုးပါနဲ့ ဖေဖေရယ်”
ရတီမှာ နာကျင်မှုကြောင့် ထန်နေသောစိတ်များ ခဏတာ ပျောက်ကွယ်သွားရသည်။ ဦးအောင်မော်က အတန်ကြာ အသာမှေးလျက် နားနေလိုက်၏။ ထိုစဉ်အတွင်း လက်များက သမီးဖြစ်သူ၏ အပျိုစင် နို့လုံးလုံးလေးများကို ဆုပ်နယ်ပေးလျက်ရှိသည်။ လက်ချောင်းဖျားလေးများဖြင့် နို့သီးခေါင်း ပန်းရောင်လေးများကို ချေနေရင်း ဖိပွတ်လှိမ့်လှည့် ကစားပေးရင်း ရတီ၏ ကာမစိတ်အာရုံကို နှိုးဆွပေးနေ၏။
ခဏအကြာ ရတီ၏ အခြေအနေမှာ မျက်နှာပြေလျော့သွားပြီး နာကျင်စွာ အော်ညည်းနေခြင်း မရှိတော့ပဲ တည်ငြိမ်မှု ရှိလာ၏။ သမီး၏ မျက်နှာ အခြေအနေကို ကြည့်နေသော ဦးအောင်မော်က တဝက်တပျက် ဝင်နေသော လီးအား တဖြည်းဖြည်း တရစ်ချင်း တရစ်ချင်း ချော့သွင်းနေလိုက်သည်။
ကာမရာဂစိတ်ကို နိုးကြွစေသော အဖြစ်အပျက်များက ဆက်တိုက်လိုပင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်း တွေ့မြင်နေရခြင်းများကြောင့် ရတီ့ထံမှ စောက်ရည် ပျစ်ပျစ်ချွဲချွဲများကလည်း တရစပ် စီးထွက်လို့ လာနေ၏။ ထိုအရည်များကြောင့်လည်း လီးအဝင်အထွက် ချောလာပြီး ရတီ့တွင် နာကျင်မှုများ လျော့ပါးသွားပြီး၊ နာသည့်နေရာတွင် အီဆိမ့်၍ ကောင်းလှသော ခံစားမှုက အစားဝင်လာသည်။
ဦးအောင်မော်က လီးကို တဖြည်းဖြည်းကစပြီး၊ ဖြည်းရာကမှန်မှန် အထုတ်အသွင်း လုပ်ပေးသောအခါ ရတီ့ဆီမှ ညည်းသံလေးများ စထွက်လာတော့သည်။ မချင့်မရဲ ညည်းသံလေးကို ကြားလိုက်ရသည်နှင့် သူ့သမီး ကာမဂိမ်းအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ ဆိုတာကို ဦးအောင်မော် သိလိုက်ပြီ။ ထို့ကြောင့် အရှိန်မြင့်ပြီး လိုးချက်များကို တင်လိုက်တော့သည်။
“အူးးးး ဖေကြီး..ရတီ.. ရတီ့ကို.. ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ..၊ ဖေကြီးရယ်.. အားးးး”
ဦးအောင်မော်မှာ ရွှန်းရတီ၏ အသံကိုဖွင့်၍ အော်ညည်းတွားလာသော တုန့်ပြန်ချက်များကို ကြည့်၍ သူ့သမီး စိတ်တအားပါလာသည်ကို သိလိုက်ပြီ။ ဒါကြောင့် ခပ်ပြင်းပြင်း ပစ်ဆောင့်တော့သည်။
အဖေဖြစ်သူ ဆီးစပ်ပေါင်ခွဆုံနှင့် သမီးဖြစ်သူ၏ ဖင်၊တင်ဆုံကြီးများ အသားချင်း ရိုက်ခတ်သံများ တဖတ်ဖတ်၊ တဖန်းဖန်း ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။ ရတီမှာ အဖေ၏ ခပ်ပြင်းပြင်း ဖိဆောင့်ချက်များကို ဆက်လက်တောင့်မခံနိုင်တော့..။ ဒူးများ ညွှတ်ကျသွားပြီး ကုန်းကုန်းလေး ကြမ်းပြင်နှင့် ကပ်နေတော့၏။ ဒါပေမယ့် ဦးအောင်မော်က အလိုက်သင့် ထပ်ရက်ကြီး ပါသွားပြီး ဆက်လက်၍ အရှိန်မလျှော့စတမ်း ကပ်ဆောင့်ပေးနေသည်။
“အိုးးးး ရှစ် အားးး.. ရတီ.. သမီး.. သမီးးး အားးး ဖေဖေ့ မယားလေးရယ်..”
“အားးး ဖေဖေ.. သမီး မနေတတ်တော့ဘူး ကောင်းတယ်၊ တအားကောင်းတယ်။ ဖေဖေက သမီးလင်.. ရတီ့ယောက်ျား၊ လင်ကြီး လုပ်ပေးတာ ကောင်းတယ်.. အားးးး ဆောင့်..”
သားအဖနှစ်ယောက်လုံး ဆွေမေ့ မျိုးမေ့၊ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးကို မေ့ပြီး ဘာမှဂရုမစိုက်တော့ပဲ ရာဂပွဲကြီးကို အသားကုန် ကြဲနေကြစဉ်၊ အခန်းထောင့် တစ်နေရာတွင် ဓားပြအဖွဲ့မှ တစ်ယောက်က လေးဘက်ထောက် ဖင်ကုန်းပေးထားပြီး ကျန်ဓားပြတစ်ယောက်က နောက်မှဆောင့်၍ လိုးနေသည်ကို ရုတ်တရက် မည်သူမျှ သတိမထားမိလိုက်ကြပေ။
“အူးးးး အားး အဖေ.. ကျွတ် ကျွတ် ဟင့်.. ကြာဖြူ ကောင်းနေပြီ..။ ဆောင့် အဖေ.. နာနာဆောင့်”
တကယ်တော့ ဤဓားပြစုံတွဲမှာ အိမ်စိုးကြီး ဘကြီးထွန်းနှင့် သူ့သမီး မြီးကောင်ပေါက်မ ကြာဖြူတို့ ဖြစ်လို့နေသည်။ နောက်ထပ်တစ်ယောက် ခေါင်းဆောင်အနေနှင့် အမိန့်ပေးနေသူကား ဘကြီးထွန်း၏ သားဖြစ်သူ အသက် ၂၅ နှစ်ရှိ ပေါ်ဦးပင်တည်း။
ဦးအောင်မော်တို့ မိသားစုမှာ ဘကြီးထွန်းမှာ သားအကြီးတစ်ယောက် ရှိသည်ကိုပင် မသိခဲ့ကြပါ။ ခဏအကြာမှာ ဘကြီးထွန်းနှင့် ကြာဖြူတို့ သားအဖချင်း လိုးနေရာမှ လူချင်းခွာလိုက်ကြပြီး၊ နှစ်ယောက်လုံး ဦးလူမော်နှင့် သမီးရတီတို့ထံ လှမ်းလာခဲ့ကြသည်။ ရတီမှာ အဖေရင်းဖြစ်သူ ဦးအောင်မော်၏ ကောင်းကောင်း အလိုးခံလိုက်ရခြင်းကြောင့် အရည်တဖြန်းဖြန်း ထွက်၍ ပြီးသွားသည်မှာ ၂ ချီပင် ရှိခဲ့ချေပြီ။ ကိုယ်ချင်းထပ်၍ မောဟိုက်စွာ ရှိနေကြ၏။
သူတို့နှစ်ယောက်နား ဘကြီးထွန်း ရောက်သွားလျှင် လူချင်းခွဲထုတ်လိုက်ပြီး ရွှန်းရတီကို ဆွဲယူပြီး ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။ ပေါင် ၂ ချောင်းကို ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီးနောက် လီးနဲ့တန်းတေ့ကာ ဘာမှ အင်ထရို မဝင်တော့ပဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် တစ်ချီထဲ ဆောင့်သွင်းပြီး လိုးလိုက်လေသည်။
“အးးးး သေပါပြီ အူးးး”
တချိန်ထဲမှာပင် ကြာဖြူကလည်း ဦးအောင်မော်အား ပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး အပေါ်မှ တက်ခွထိုင်၍ မွှေ့လေတော့၏။
“အားးး ကလေးမ… အူးးး ရှီးး…”
တစ်ဘက်ခြမ်းမှ ဒေါ်အေမီကြိုင်မှာလည်း ရင်ကမွေးသည့် သားအရင်းဖြစ်သူ တေဇာမော်၏ လိုးချက် ဆောင့်ချက်များကို အရသာရှိလှစွာ မိန်းမောခံစားရင်း၊ သားအမိနှစ်ယောက် မောပန်းစွာ အသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီး ထပ်လျက် ငြိမ်ကျသွားသည်။ တစ်ချီ ဂိမ်းအိုဗာ ဖြစ်သွားလေပြီ။
ပေါ်ဦးက တေဇာကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး၊ ဒေါ်အေမီကြိုင်ကို ဆွဲမှောက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အပေါ်မှ တက်မှောက်ခွလိုက်ပြီး တင်ပါးဆုံတစ်တစ်ကြီးတွေကြားမှ စောက်ပတ်ကြီးကို ဟဖြဲကာ ဒစ်နှင့်တေ့၍ ထိုးသွင်းဖိချလိုက်ပြီး အနောက်ဖက်မှပင် အချက်မှန်မှန် ပြင်းပြင်း ဆောင့်လိုးပေးလိုက်သည်။
အေမီကြိုင်တစ်ယောက် ဆက်လက်ငြင်းဆန် ရုန်းကန်ရန် အားအင်လည်း မရှိတော့၊ သူမ အခုသိတာ သာယာနေတာ ကောင်းနေတာပဲ သိတော့သည်။ အချိန်အတန်ကြာသွားသည်တွင်တော့၊ ကမ်းခြေ အပန်းဖြေ အိမ်ကြီးမှာ ဂရုဆက်စ် အုပ်စုလိုက် ဆွင်းဂင်းပွဲတော်ကြီး ကျင်းပရာ၊ ဇာတ်စင်ကြီး ဖြစ်သွားတော့လေသည်။
အားလုံးသော သူတို့မှာ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် လူချင်းလဲဖယ်၍ လိုးနေ ဆောင့်နေကြတော့သည်။ စောစောက ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်မှုများ၊ ကြမ်းကြုတ်စွာ အကြမ်းဖက်မှု၊ အနိုင်ကျင့်မှုများ၊ နာကျည်းမှု အာဃာတထားမှုမျာ မရှိတော့ပဲ ပျောက်ကွယ်ကုန်ကြပြီး ကာမရာဂ ရမ္မက်သွေး စိတ်များဖြင့်သာ ဆူဝေတောက်လောင်နေကြကုန်ပြီး လိုးပြီးရင်း လိုးချင်၊ ခံပြီးရင်းခံချင် စိတ်များဖြင့် ကာမအရသာကို အပြည့်အဝကြီး ခံယူနေကြတော့သည်။
အားလုံး မောဟိုက်နွမ်းလျ ဖလက်ပြနေကြပြီး ခဏအကြာ ဓားပြများ အချင်းချင်း လက်တို့ပြီး ခပ်ဆိတ်ဆိတ်ပင် ထွက်ခွာသွားကြသည်။ နဂိုထဲက သူတို့ပစ္စည်းလိုချင်လို့ လာကြတဲ့ပုံ ဟုတ်ဟန်မပေါ်၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဂိမ်းတစ်ခုကို ပလန်ချပြီး ကစားချင်တာ ဖြစ်ပုံရသည်။ ဦးအောင်မော်တို့ မိသားစုဝင် လေးယောက်စလုံးမှာတော့ အဝတ်အစားမကပ် တုံးလုံးပက်လက်ကြီးတွေနှင့် ကျန်ခဲ့ကြသည်။
စေးထန်းချွဲကျိနေသော လရည်များ စောက်ရည်များက ဒေါ်အေမီကြိုင်နှင့် ရွှန်းရတီမော်တို့ သားအမိ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ပေပွစီးကျ လိမ်းကျံလျက်ရှိ၏။ အတော်ကြာသည့်တိုင်အောင် လေးယောက်သား၊ အားလုံး ငြိမ်သက်နေကြသည်။ ရောပြွမ်းသော ဖီလင်များ ခံစားနေရပုံပင်။ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို စတင် ဖြိုခွဲလိုက်သူက တေဇာမော်ပင်..။
“ရတီ… ညီမလေးကိုလည်း ကိုကို ထပ်လိုးကြည့်ချင်တယ်၊ ကိုကိုနဲ့ အခန်းထဲ လိုက်ခဲ့နော်”
တေဇာက ရတီ့ဆီ လျှောက်သွားပြီး ဆွဲထူလိုက်ကာ သူ့ညီမ၏ လက်ကလေးကိုဆွဲ၍၊ ပြင်ထားတဲ့ အိပ်ခန်းဘက်သို့ ဝင်သွားလိုက်ကြသည်။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ဦးအောင်မော်နဲ့ အေမီကြိုင်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်၊ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် အဓိပ္ပာယ်ပါပါ ကြည့်လိုက်ကြပြီး လက်တွေဆွဲလို့ သားနဲ့သမီး ဝင်သွားရာ အခန်းထဲသို့ပင် လိုက်ဝင်သွားကြလေတော့သတည်း။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 13,952
သူမပြောသော သူမအကြောင်း →